Kwiimeko zokusetyenziswa kweKhadi le-Jailbreak akuvumelekanga | IPhone iindaba
I-Jailbreak ayivumelekanga kwimigaqo yokusetyenziswa kweKhadi le-Apple
UToni Cortés | | Apple Pay, Jailbreak, Ezahlukeneyo
Imiqathango yokusetyenziswa ekufuneka yamkelwe ukuze isetyenziswe Ikhadi le-Apple. Bacacisa gca Ukuvalwa kwejele kwi-iPhone yethu enxulunyaniswa nekhadi lokuhlawula.
Goldman SachsIqabane lezemali likaTim Cook kwiprojekthi yeKhadi leApple, sele lipapashe isivumelwano nomthengi ke akukho mathandabuzo ngayo. Kwesi sivumelwano kuyavunywa ukuba ayizukuba likhadi eliqhelekileyo letyala, kuba liza neemeko ezithile ezivela kuApple.
Njengoko kulindelwe, kumcimbi obalulekileyo kwaye ubaluleke njengokuhlawula ngesixhobo, I-Apple iya kuba buthuntu kwaye ayiyi kuvumela i-iPhone ukuba iphazanyiswe esinokuhlawula ngayo, sazisa izicelo ezingakhange zidlule kulawulo lwenkampani. Yinto eyaziwayo I-Jailbreak, i-iOS engekho mthethweni, eguqulweyo, apho sinokufaka khona imvelaphi ethandabuzekayo ethi ngenxa yezizathu ezithile ingabikho kwiVenkile yeApple, ke ngoko ngaphandle kolawulo lwenkampani, ngomngcipheko oku kubandakanya.
Into enje yayinokulindeleka, kuba ngokwembali I-Apple ayikaze iyekelele ekusebenziseni i-jailbreak. Nasiphi na isicelo esifumaneka kwiVenkile yeApple sicwangcisiwe phantsi kwemigaqo yenkampani engqongqo, evavanya usetyenziso ngalunye kunye nohlaziyo lwayo ukuze oku kuzalisekiswe. Sisikhalazo sikanaphakade sabachasi be-Apple, ulawulo lwayo olupheleleyo kunye nokusilela kokuguquguquka. Kukwaluncedo lwabalandeli bayo, uxolo lwengqondo ukuba nasiphi na isicelo osifakayo sikhuselekile.
Inkqubo yobhaliso kwaye ukuvunywa kweApple Card kuyakwenziwa ngokusebenzisa iapps yeWallet, ngesivumelwano sokuba isixhobo esisetyenzisiweyo kufuneka "silungele" Oku kubonakala kusebenza kwinkqubo yokubhalisa ikhadi, oko kuthetha ukuba umntu obhalisileyo uya kuhlala ne-firmware ye-iOS. Oku kuthetha ukuba inkqubo yobhaliso iya kuqinisekisa ukuba i-firmware ye-iPhone yeyokuqala. Ukuba ayisiyiyo, ayizukufaka. Ukuba uza nombono omkhulu wokufaka kuqala iKhadi leApple kwaye emva kokuqhekeka kwejele, ukufikelela kwakho kwiKhadi leApple kunokwaliwa nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Imiqathango yokusetyenziswa ikwalela ababhalisi beKhadi le-Apple ekusebenziseni le nkonzo ukuthenga imali, oko kukuthi, ukuthenga amatikiti elotto, ukubheja, iichips ekhasino, okanye nakwii-cryptocurrensets, ezinjengeBitCoin okanye i-Ethereum. Ayisiyonto intsha le. Maninzi amazwe ehlabathini apho olu hlobo lokuthengwa kwamakhadi etyala aluvumelekanga.
Ekuqaleni I-Apple Card izakufumaneka ekupheleni kuka-Agasti, njengoko iqinisekisiwe nguTim Cook.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Jailbreak ayivumelekanga kwimigaqo yokusetyenziswa kweKhadi le-Apple
I-Apple ayizukuguqula amaxabiso eemveliso zayo ngenxa yeerhafu zikaTrump
Olunye uhlobo lomculo luzuza udumo kwi-Apple Music ngoludwe olutsha lwe-ALT CTRL